"ဒီလို ရာဇ၀င်ကိုရော နားထောင်ဖူးလား? လူတိုင်းရဲ့လက်မှာ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ အနီရောင်ကြိုးစနဲ့ ချည်ထားကြတယ်။ ကျန်ကြိုးစကိုတော့ တခြားလက်တစ်ဘက်မှာ ချည်ထားတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့အနီရောင်ကြိုးစချင်း ချည်ထားတဲ့လူကို
"သူက ငါ့အတွက် ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ သော့မဟုတ်ဘူး။ ငါ သော့တစ်ချောင်း လဲကြည့်သင့်ပြီထင်တယ်"လို့ ကေသီက သူ့စိတ်ကူးကို သူငယ်ချင်းတွေဆီ ရင်ဖွင့်တယ်။ ကျန်သူငယ်ချင်းတွေက သဘောတူပေမယ့် ကျွန်မ ခေါင်းခါခဲ့တယ်။
"ကေသီ... ဒီလို ခဏခဏချစ်သူပြောင်းတိုင်း နင်နဲ့ အသင့်လျှော်ဆုံးချစ်သူ တကယ်တွေ့နိုင်မလား?" သံသယအမေးနဲ့ ကျွန်မမေးမိတယ်။
"တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားမလည်နိုင်မှတော့ လမ်းခွဲတာ အကောင်းဆုံးပဲ၊ ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်လည်း ဘာမှထူးမလာဘူး" ကေသီက ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြန်ဖြေတယ်။
"ဟုတ်တယ်.. စောစော လမ်းခွဲလေ စောစောပျော်ရလေပဲ" မိဆိုးက ၀င်ထောက်တယ်။
"မှန်တာပေါ့။ ကားထားဖို့နေရာ လပ်ပေးမှ တခြားကားဝင်ရပ်နိုင်မှာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ မသင့်လျှော်တဲ့လူကို နေရာပေးရင် တကယ့်ဖူးစာရှင်က ဘယ်မှာနေရာရှိတော့မလဲ?" မော်လီက ထောက်ခံမဲဝင်ပေးတယ်။
"ဒါဟာ လော့ဂျစ်မှားတစ်ခုပဲ။ ကေသီအတွက် ပိုသင့်လျှော်တဲ့ ဖူးစာရှင်ရှိတယ်၊ မွေးကတည်းက သူ့အတွက်
ဖွင့်နိုင်တဲ့သော့ဖြစ်အောင် အဲဒီသော့တံကို စက်တွေနဲ့သေချာပွတ်တိုက် ညှိပေးရတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာ မွေးလာကတည်းက ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်၊ ဖွင့်နိုင်မယ့် သော့ရှိတယ်လို့ ငါတော့မထင်ဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ့်အတွက်ကြောင့် မွေးဖွားလာရတယ်ဆိုတဲ့ လူလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး"
"ကိုယ်သိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က သော့တစ်ချောင်းဆိုပါစို့။ ကိုယ်နဲ့သူဟာ လုံးဝမလိုက်ဖက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ကိုယ့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလူဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ သော့တံကိုစက်တွေနဲ့ ပွတ်တိုက်ညှိပေးသလို အချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်တယ် ဆိုတာ မတူညီတာကို ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းပေးတာပဲ။ ကိုယ့်အချစ်နဲ့ သူ့ရဲ့ မချောမွတ်တဲ့ထောင့်တွေကို ပွတ်တိုက်ညှိပေးမယ်။
ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအချိန်မှ အချင်းချင်း အဆင်ပြေပြေ၊ ချောချောမွတ်မွတ် ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့ ကိုယ်သင်ယူနိုင်မယ်။ နားလည် ခွင့်လွတ်တတ်လာမယ်။ အလျော့ပေး နောက်ဆုတ်တတ်လာမယ်။ မတူညီတဲ့အရပ်ကနေ လောကကြီးကိုကြည့်ပါ။ ဒါမှ ကိုယ်ပိုရင့်ကျက်လာတယ်လို့ ခံစားမိလိမ့်မယ်"
"ကိုယ်နဲ့သင့်လျှော်တဲ့ ဖူးစာရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲ ကိုယ်တွေးနေရင် အလုပ်နဲ့သက်သေပြတာကို ကိုယ်ဖယ်ထုတ်မိပြီး "သူက ငါ့ရဲ့တကယ်ဖူးစားရှင် မဟုတ်သေးဘူး၊ နောက်တစ်ယောက် ပြောင်းဦးမယ်။ အရွယ်တွေ နုပျိုတုန်း နောက်တစ်ယောက်ကို
"နင်ရွေးသင့်တာက လမ်းခွဲဖို့ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံး လိုက်ဖက်တဲ့ချစ်သူဖြစ်အောင် သူ့ကိုပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ပြင်ဆင်ဖို့ပဲ ကေသီ"
မူရင်း-Caffeine ၏ (http://share.youthwant.com.tw/sh.php?id=31022891&do=D) အား ဘာသာပြန်ဆိုထားသော နိုင်းနိုင်းစနေအားအထူးကျေးဇူးတင်ရင်း mysing မှ မိတ်ဆွေများနှင့် အတူမျှဝေခံစားလိုက်ပါတယ်။
သင့်ဘ၀မှာမှန်ကန်တဲ့ ဖူးစာရှင်နှင့် တွေ့ ဆုံပြီး ထာဝရအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျှက်......